नैनसिंह महर - कान्तिपुर समाचार
सशक्त नेतृत्व आवश्यक
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अकल्पनीय हार बेहोरेको नेपाली कांग्रेसभित्र चुनावी असफलताबारे समीक्षा सुरु भएको छ । आफ्नै नेतृत्वमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनमार्फत स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र यसको कार्यान्वयनमा कांग्रेसको भूमिकाको समेत नजरअन्दाज हुनेगरी निर्वाचनको परिणाम आउनुमा के–कस्ता कमजोरी रहे ? भविष्यमा सफलता प्राप्त गर्न अपनाउनुपर्ने बाटो र पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के हुन् ? भन्ने प्रश्न आम कांग्रेसीका अगाडि छन् ।
लोकतन्त्रको जग स्थानीय निर्वाचन
करिब १९ वर्षपछि हामी स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आइपुगेका छौं । तमाम आरोह–अवरोह, शंका–उपशंकालाई चिर्दै सिंगो देश निर्वाचनमा होमिसकेको छ । वैशाख १९ गते पहिलो चरण अन्तर्गत भएको मनोनयन दर्ताको क्रममा नागरिकमा देखिएको उत्साहले पनि निर्वाचनप्रति जनताको व्यग्रताको पुष्टि गर्छ ।
नैनसिंह महरका लेखहरु :